ကြောင်မြီးတို - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Lynx ၊ လျင့်ဇ်)
ကြောင်မြီးတိုမျိုးစိတ်(၄)ခု။ ဝဲဘက် ထိပ်မှ နာရီလက်တံအတိုင်း- ကနေးဒီးယန်း လျင့်ဇ်(L. canadensis)၊ ယူရေးရှန်း လျင့်ဇ်(L. lynx)၊ အိုက်ဘေးရီးယန်း လျင့်ဇ်(L. pardinus)၊ ဘော့ဘ် တောကြောင်(L. rufus)။
လျင့်ဇ် ကြောင်မြီးတိုများ ကျက်စားရာဒေသ။
ကြောင်မြီးတို (အင်္ဂလိပ်: Lynx) သည် ကြောင်မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်၊ အာရှတိုက်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်နေသည်။ ထိုဒေသများတွင် ယင်းကို (Lynx ၊ အသံထွက်: လျင့်ဇ်) ဟူ၍ခေါ်သည်။ ကြောင်မြီးတိုတွင် အမြီးငုတ်တို၊ ရှည်လျားသော ခြေတံ လက်တံ၊ ထောင်နေသောနားရွက်များရှိ၏။ ကြောင် မျက်စိသူငယ်အိမ်ကဲ့သို့ပင် ကြောင်မြီးတို၏ မျက်စိသူငယ်အိမ်သည် နေ့ဖက်အလင်းများချိန်တွင် မျှင်⁠မျှင်ကလေး သေးသွယ် ကျဉ်းမြောင်းသွား၍၊ ညဉ့်ဖက်မှောင်ချိန်ရောက်မှ ကြီးမားဝိုင်းဝန်းလာသည်။
ကြောင်မြီးတိုသည် အလွန်မျက်စိလျှင်လေသည်။ ယုန်ပေါ သော အချိန်များတွင် ယုန်ကို ဖမ်းယူစားသောက်၏။ ယုန် မရသောအခါတွင် ကြက်၊ ငှက်နှင့် တိရစ္ဆာန်ငယ်တို့ကို သတ်ဖြတ်စားသည်။ သစ်ပင်အတက်၊ ရှဉ့်အလိုက် အလွန် ကောင်းလှသည်။ အသိုက်တွင်း ငှက်ငယ်များကို သတ်ဖြတ်ရာ၌၎င်း၊ တောကောင်ကလေးများကို ချောင်းမြောင်း ခုတ်ဖမ်းရာ၌၎င်း၊ ကြောင်မြီးတိုသည် ကျင်လည်သည်။
ဆောင်းရာသီကျရောက်၍ ရေခဲများဖုံးလွှမ်းသောအခါ အစာငတ်ပြတ်နေသည့် သတ္တဝါကလေးများကို ခုတ်ဖမ်း၏။ အစာ အလွန်ရှားပါးသောအခါများ၌ ငှက်သေများကိုပင် စားတတ်သည်။ အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရန် ကြောင်မြီးတို၌ ထူထဲသော သားမွေးရှိ၏။ ဆောင်းတွင်းအခါ ထိုသားမွေးသည် ပို၍ရှည်လာသည်။ ကြောင်မြီးတိုကို အချို့လူများက သားမွေးရလို၍ ဖမ်းဆီးကြ၏။ သို့သော် ယင်းကိုဖမ်းရန်မှာ မလွယ်ကူလှပေ။ အခုန်အပေါက် အပြေးအလွှားကလည်းမြန်၊ ရေကူးကလည်း သန်သောကြောင့် ကြောင်မြီးတိုသည် တမဟုတ်ခြင်း ပျောက်ကွယ်သွားတတ်သည်။
ညအခါ ကြောင်မြီးတို အော်လိုက်သောအသံသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၏။ စူးရှစွာ တစ်ချက်အော်လိုက်ပြီးနောက် တိတ်ဆိတ်သွားတော့သည်။ ထိုသို့အော်ရာတွင် အကြောင်းရှိ၏။ ကြောင်မြီးတိုသည် သားကောင်ကလေးများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသောအခါ သားကောင်ကလေးများသည် ရန်သူမမြင်နိုင်အောင် ငြိမ်သက်စွာ ဝပ်နေတတ်ကြ၏။ ကြောင်မြီးတိုသည် ခုတ်ရန်ချိန်ရွယ်ထားပြီးနောက် စူးရှစွာ အော်လိုက်သည်။ ထိုအခါ သားကောင်ကလေးတို့သည် ကြောက်လန့်၍ ထခုန်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ခုတ်ဖမ်းလိုက်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၌ရှိသော ကြောင်မြီးတို၏ သားမွေးသည် မီးခိုးရောင်အောက်ခံတွင် အညိုပြောက်များရှိ၍ အလွန် အဖိုးတန်သည်။
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "ကာနီဗိုရာ မျိုးစဉ်"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ pp. 541–542။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
BNF: cb156347519 (data)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြောင်မြီးတို&oldid=719805" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။